Onyinye Na-ekpo ọkụ n'Ịntanet Egwuregwu Na-ekpo ọkụ China Manufacturer
Nkọwa:Ihe ndị na-ekpocha ọka sulu na sulu,PET Egwuregwu Ngwá Ngwá Ngwá Agha,Ulo Okpokoro Ugbo Akwukwo Ugbo Azu
Home > Ngwaahịa > Ụlọ Ụlọ Ọrụ Ngwá Ọrụ > Sistem Na-ekpocha Ụlọ Ala Seram > Onyinye Na-ekpo ọkụ n&#39;Ịntanet Egwuregwu Na-ekpo ọkụ
Ubu oke: 1000PCS/DAY
Xinghongchang na-enye gị ọkụ ma dị mma na oyi. Lelee ihe nkiri Cinema anyị na Ceramic Tile maka nri ọhụrụ gị ! Ebe anyị na-arụ ọrụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ, bụ nke a na-emepụta ihe nkiri kpụ ọkụ n'ọnụ, bụ nkà na ụzụ ọhụrụ na ụlọ ọrụ ọkụ. Nkà na ụzụ ọhụrụ a ga-enye ndị nwere echiche nke New Green Electrical Heating Solution. Enwere ike itinye ya na ngwa ngwa ụlọ, akụrụngwa, ọrụ nlekọta ahụike na ihe ndị ọzọ.
Ahụike: Ebe ikpochapu ọkụ na-ekpo ọkụ bụ ụzọ na-acha akwụkwọ ndụ. Njirimara nke radiation radiation infrared nwere ike ime ka ọbara gbasaa, mee ka ahụ mmadụ dịkwuo ala, belata ahụ ike na ihe ndị ọzọ.
Ike nchekwa: Site na nsụgharị akwara dị elu, a pụrụ iwesa ala elu n'ime obere mintues. Jiri ihe karịrị pasent 50 tụnyere ihe ọkụkụ.
Ebe obibi gburugburu ebe obibi : Emepụtala ihe ọ bụla na-emerụ ahụ, dịka ndị na-eme ka ebili mmiri na-emepụta
Aka na-ekpo ọkụ na Control Control abụọ Kpọtụrụ ugbu a
Ejighị ọkụ ọkụ 2 Control Control Temperature Kpọtụrụ ugbu a
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Kwesịrị Ekwesị Kpọtụrụ ugbu a
Ihe ndị na-ekpocha ọka sulu na sulu PET Egwuregwu Ngwá Ngwá Ngwá Agha Ulo Okpokoro Ugbo Akwukwo Ugbo Azu Ihe ndị na-ekpo ọkụ sauna Ihe ndị na-ekpo ọkụ na-ekpuchi Ihe ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ Akụkụ ndị na-ekpo ọkụ sauna na Ro Igwe ihe nkiri na-ekpo ọkụ sauna